Movistar + Lite: သင်သိထားသင့်သမျှ | Gadget သတင်း
Movistar + Lite: မင်းသိထားသင့်သမျှ
Ignacio Sala | | ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး, လွှ
ကျွန်ုပ်တို့၏အစဉ်အလာအရသိရသည့်ရုပ်မြင်သံကြားသည်အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများ၏နှစ်သက်ရာများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင်၌, ငါတို့သည်သူတွေကိုတွေ့ဆုံရန် သင် streaming ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါပြီ သင်လိုချင်တာ၊ သင်လိုချင်တာနဲ့ဘယ်နေရာကိုလိုချင်တာကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြင်း။
ရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားတွင်မည်သည့်ကြော်ငြာနှင့်မျှမတူဘဲကျွန်ုပ်တို့အားရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများမည်သို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုမြင်ရသည်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့ရရှိမည့်အချိန်ကာလအကြောင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ streaming video service မှကမ်းလှမ်းသောအဆင်ပြေမှုကိုရုပ်မြင်သံကြားတွင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Movistar + Lite သည် Netflix၊ HBO နှင့် Amazon Prime Video တို့မှရှိပြီးသားရှိပြီးသားကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် Movistar + Lite အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
1 Movistar + Lite ဆိုတာဘာလဲ
2 Movistar + Lite ကဘာကိုပေးမလဲ
3 Movistar + Lite တွင်ဘောလုံးကစားနိုင်ပါသလား။
4 ၎င်းတွင် Netflix သို့မဟုတ် HBO ပါဝင်ပါသလား။
5 Movistar + Lite ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
6 Movistar + Lite ဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါသနည်း
7 Movistar + Lite ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ
8 အကြောင်းအရာများကို Movistar + Lite တွင်ကူးယူနိုင်ပါပြီ
9 Movistar + Lite ရဲ့အရည်အသွေးကဘာလဲ
10 Movistar + Lite ကထိုက်တန်ပါတယ်
Movistar + Lite ဆိုတာဘာလဲ
Movistar + သည်အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Movistar သည်အင်တာနက်အထုပ်နှင့်တယ်လီဖုန်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အထုပ်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဖောက်သည်များအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဒီအော်ပရေတာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစျေးကွက်မှာစျေးအကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
များပြားသောသုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိရန် Movistar ကတင်ပြခဲ့သည် Movistar + Lite၊ လျှော့ထားသော Movistar + ဗားရှင်း (အမည်မှဖော်ပြသည်အတိုင်း) သို့သော်၎င်းနှင့်မတူပါက၎င်းသည် Movistar ဖောက်သည်မဟုတ်သောမည်သည့်သုံးစွဲသူကိုမဆိုရရှိနိုင်သည်။
Movistar + Lite ကဘာကိုပေးမလဲ
Movistar + တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောကန ဦး အကြောင်းအရာ Movistar + မှာတွေ့ရတာအတူတူပဲ ၎င်းတို့ထဲမှ #0လိုင်းများ၊ Movistar Series၊ Seriesmanía, Fox, TNT, Comedy Central, AMC နှင့်အားကစားလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ #သွားကြရအောင်ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှကစားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ကစားသမားများဖြင့်ကစားနိုင်သည့်ပွဲဖြစ်သည်။
ဤလိုင်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်သောနေရာတွင်ရှိသည် စီးရီး ၃၀၀၊ အစီအစဉ် ၆၀ နှင့်ရုပ်ရှင် ၂၇၀ တို့ပါဝင်သည်။ Movistar + တွင် La Peste, El Embarcadero, La Vida Perfecta ကဲ့သို့သောမူရင်းထုတ်လုပ်မှုကိုတွေ့နိုင်သည်။
Movistar + Lite တွင်ဘောလုံးကစားနိုင်ပါသလား။
စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ချန်ပီယံလိဂ်၏သဘောတူညီချက်များ သူတို့ကအရမ်းမြင့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည် Movistar ကိုတစ်လ ၈ ယူရိုနှုန်းနဲ့ပေးရမယ်။ Movistar + Lite မှရရှိနိုင်သောပြိုင်ပွဲများမှာ -
တင်းနစ်: Wimbledon, Masters 1000 နှင့် ATP 500
NFL နှင့် SuperBowl
၆ နိုင်ငံ၊ ရပ်ဂဘီချန်ပီယံနှင့် ၇ စီးရီး၊
ထို့အပြင်မှတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအားကစားအစီအစဉ်များအပြင် #သွားကြရအောင် ရော်ဘင်ဆင်အစီရင်ခံစာ၊ တစ်နေ့တာ NBA Generation ကဲ့သို့ ...
၎င်းတွင် Netflix သို့မဟုတ် HBO ပါဝင်ပါသလား။
ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးသည်တိကျသောသဘောတူညီမှုများရရှိထားသော်လည်း Netflix မှရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများသည် HBO ကဲ့သို့ပင် Netflix တွင်သီးသန့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Movistar + Lite တွင်ကျွန်ုပ်တို့သွားမည် အခြားအခြား HBO အကြောင်းအရာရှာပါ Games of Thrones စီးရီးများနှင့် Mad Men ကဲ့သို့ခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့လိမ္မော်ရောင်သည်လူမည်းအသစ်၊ သွေးစစ်ဖြစ်သည်။
Movistar + Lite ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
Movistar + Lite ကိုတစ်လလျှင် ၈ ယူရိုဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် တယ်လီဖုန်းလိုင်းလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်၊ မဖွင့်နိုင်သည်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခတည်ထောင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၄၀ ဆင့်နှင့် ၃၀ ဆင့်ပါ SMS ပေးပို့မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။
အခြား streaming video service လိုပဲ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်ထာဝရတည်တံ့မှုမရှိသောကြောင့် Movistar + ပါဝင်သည့်မည်သည့် Movistar အထုပ်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။ Movistar + Lite မှ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၁ လလုံးလုံးအခမဲ့စမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းမှာပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
Movistar + Lite ဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါသနည်း
ယခုအချိန်တွင် Movistar သည်အခြားနိုင်ငံများသို့အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်ရန်အခွင့်အရေးများကိုညှိနှိုင်းနေစဉ် Movistar + Lite အကြောင်းအရာများကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပတစ်ခွင်သို့ခရီးသွားလျှင်၊ သင်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြwithoutနာမရှိဘဲကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအခြားနိုင်ငံမှငှား။ မရပါ။
Movistar + Lite ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ
Streaming video service ကောင်းတစ်ခုအနေဖြင့် Movistar သည်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းအသစ်မှအကြောင်းအရာများကိုစားသုံးရန်အတွက်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည် လက်ရှိ Movistar + အသုံးပြုသူများအားလုံးအသုံးပြုသောတူညီသော application သည်ဒါကြောင့်ဒီကုဒ်ဒါကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
Movistar + လျှောက်လွှာကိုရရှိနိုင်သည်။
Samsung နှင့် LG မှ Smart TV များ
Android TV မှစီမံခန့်ခွဲသောတီဗွီများ (Sony, Philips, Panasonic)
Android TV ကိရိယာများ (Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box …)
Android ထုတ်ကုန်များ၊ iPhone၊ iPad နှင့် Amazon Fire TV Stick
Movistar + အက်ပလီကေးရှင်းသည် -
Play Station က 4
ကံမကောင်းစွာယခုနှင့် အဲဒါဟာအနာဂတ်အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ဟုထင်ရသည်PlayStation4ကဲ့သို့ console များမှသုံးစွဲသူများသည်ဤပလက်ဖောင်း၏ content များကိုသုံးစွဲရန်သူတို့၏ console များကို သုံး၍ မရပါ။ Mac အသုံးပြုသူများသည်အနည်းဆုံးအစပိုင်းတွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ရန် Safari မှလွဲ၍ မည်သည့် browser ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချထားသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နီးပါးကထို option ကိုကြေငြာခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိမရရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ရေးသားသူ: Movistar စပိန်
အကြောင်းအရာများကို Movistar + Lite တွင်ကူးယူနိုင်ပါပြီ
Movistar + Lite သည် ၄ ​​င်း၏ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးလိုသောအခြားမိမိကိုယ်ကိုလေးစားသော VOD ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ပင် iOS နှင့် Android မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပဲအကြောင်းအရာကို download ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည် တက်ဘလက်တွေလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးစရာကိုပြသတဲ့ရုပ်ရှင်များနဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်သာလုပ်နိုင်တယ်။
Movistar + Lite ရဲ့အရည်အသွေးကဘာလဲ
Movistar streaming ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရှိသောအကြောင်းအရာအားလုံးသည် 720p ရရှိနိုင်ပါ၎င်းသည်၎င်း၏တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်သော Netflix (4k) နှင့် HBO (1080p) နှင့်ပေးသောအရည်အသွေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျှတသောဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုပါက resolution ကို ၅၇၆p လျှော့ချသောကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးလာသည်။
Movistar + Lite ကထိုက်တန်ပါတယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိ၌ရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုပထမ ဦး ဆုံးဌာနခွဲဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့မဟုတ်ချန်ပီယံလိဂ်၏စျေးနှုန်းနှင့်ပုံအရည်အသွေးနှင့်မကမ်းလှမ်းနိုင်ပါက၊ ဒီ Movistar ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကတကယ်မထိုက်တန်ပါဘူး.
သင်တစ် ဦး ကိုဝင်ရောက်လိုလျှင် စီးရီး၏လက်တွေ့ကျကျအဆုံးမဲ့ catalog Netflix သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် (ယူရို ၇.၉၉ - စျေးအသက်သာဆုံး ၀ င်ငွေကိုယူသည်။ ) အကယ်၍ သင်သည်အရည်အသွေးစီးရီးများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက HBO သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Amazon Prime Video သည် Prime subscription တွင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပါဝင်မှုသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားလာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး » Movistar + Lite: မင်းသိထားသင့်သမျှ
Asus Zenbook 14 - အမွှေးအကြိုင်ကောင်းသည့်ပုလင်းသေးသေးလေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ